होलीमा रंगका कारण हुने असरबाट यसरी जोगिनुहोस् - Gandaki Diary - Digital News Portal From Nepal
होलीमा रंगका कारण हुने असरबाट यसरी जोगिनुहोस्
काठमाडौँ– आज (आइतबार) होली अर्थात रंगको पर्व। उत्सवको पर्व। होली आज उपत्यका लगायत देशका पहाडी जिल्लामा हर्ष उल्लासका साथ मनाइँदै छ। तराईका जिल्लाहरुमा भने होली पहाडी जिल्लाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ।
होलीमा रंग खेल्नु। एक अर्कोलाई रंग दल्नु। अनुहारमा विभिन्न केमिकलयुक्त पेन्टहरु दल्नुलाई धेरै जसोले सामान्य रुपमा लिने गरेको पाइन्छ। किनकी यो रंगको पर्व हो, होलीमा नरंगीए कहिले? भन्ने प्रश्न पनि धेरैको हुन सक्छ।
तर चिकित्सकहरु भने होली खेल्दा सावधानी पूर्वक खेल्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरुका अनुसार रंगहरुको यो पर्वमा सामान्य कुरामा ख्याल नगर्दा स्वास्थ्य ठूलै समस्या झेल्नु पर्ने समेत हुन सक्छ।
वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. सविना भट्टराईका अनुसार पछिल्लो समय प्रयोग गरिने रंगहरुमा अत्यधिक मात्रामा ‘केमिकल’ पाइने गरेका छन्। त्यस्ता केमिकलयुक्त रंगका प्रयोगले मानिसको छालालाई असर पु¥याउनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरणलाई समेत असर गरिरहेको हुन्छ।
उनले भनिन्,‘होली रंगको पर्व भएकाले विभिन्न प्रकारका रंगहरुको प्रयोग गरेर मनाइँन्छ। होलीका लागि पछिल्लो समय प्रयोग गरिने रंगहरु धेरै केमिकलयुक्त भएको पाइन्छ। यस्तो रंगहरुले छालामा विभिन्न असर पार्ने गर्छ।’
परापूर्वकालमा होलीमा प्राकृतिक रंगहरुको प्रयोग धेरै हुने गरे पनि पछिल्लो सयम धेरै रसायन मिसिएका रंगहरुको प्रयोग धेरै भइरहेको डा. भट्टराई बताउँछिन्।
‘रंगले छालामा कस्तो असर पर्छ भन्दा पनि पहिला हामीले कुन–कुन रंगमा के–के केमिकल हुन्छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी हुन्छ। सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने रातो रंग हो। जसमा मर्करी सल्फाइड ‘केमिकल’ धेरै प्रयोग गरिए हुँदा यसले छालालाई मात्र नभएर भित्री अङ्गहरुलाई समेत असर गर्ने गर्छ। कालो रंगमा लेड अक्साइड, निलो र हरियो रंगमा कपरसल्फेट हुन्छ। यी रंगभन्दा पनि अझ धेरै टल्किने रंगहरु छालाका लागि खतरानाक मानिन्छन्। यस्ता रंगहरुमा माइका, सिलिका जस्ता ‘केमिकल’ को प्रयोग धेरै गरिएको हुन्छ।’
धेरै ‘केमिकल’ प्रयोग गरिएका रंङको प्रयोग गर्नाले छालामा असर गर्नुका साथै केहिगरि शरीरभित्र पसेको खण्डमा स्वास प्रश्वास, किड्नी, ब्रेन, न्युरोलोजी सम्बन्धी समस्यासमेत देखिने डा. भट्टराईले बताइन्।
यस्तै उनका अनुसार रमाइलो गर्ने क्रममा रङ जथाभावी खेल्दा आँखाको दृष्टि गुम्ने, कानको जाली फुट्ने, एलर्जी, दम, छालासम्बन्धी विभिन्न समस्याले सताउन सक्छन्।
‘बजारमा पाइने ‘केमिकलयुक्त’ रङहरुको साटो प्राकृतिक रंगहरुको प्रयोग गर्नुस्। पहेँलोको लागि बेसारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी मेहेन्दी विभिन्न फूलहरुको रस पनि रंगको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जसले छालालाई कुनै प्रकारको नोक्सान पु¥याउँदैन’, डा. भट्टराई भन्छिन् , ‘रंग खेल्नुभन्दा पहिला शरीरमा तेल, मोस्चराइजर, सनस्क्रिम लगाउनु पर्दछ। यसो गर्दा रंगले प्रत्येक्ष रुपमा पु¥याउने असरबाट बच्न सकिन्छ। रंग खेलिरहँदा छाला पूर्णरुपमा सुरक्षित राख्न सकिँदैन। तर कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि केहिबेर होली खेलेर नुहाउनु नै हो।’
विशेषगरी सानो बालबालिका र गर्भवतीको छाला सेन्सेटिभ हुने भएकाले रङको प्रयोग गर्दा एकदमै ख्याल राख्नु पर्ने उनी बताउँछिन्।
यस्तै डा. भट्टराईका अनुसार रंग धुँदा कहिल्यै पनि बेस्सरी रगडेर धुनु हुँदैन। कडा साबुन, डिटर्जेन्टको प्रयोग गर्नु हुँदैन। रंग दुई तीन दिनमा आफै जाने भएका कारण रंग फाल्नका लागि बल लगाएर जोडले रगड्ने काम गर्नु हुँदैन।